Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyada Dermark oo Copenhagen Kaqabsoomay.
Shirkii Jaaliyada Dermark oo Copenhagen Kaqabsoomay.
Maanta oo Sabti ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 23/12/17 waxaa kulankoodii caadiga ahaa isugu yimid xubnaha Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee wadanka Dermark iyo waliba marti sharaf kale oo aad ubadan.
Kulankan oo kaqabsoomay magaalada caasimada ah ee Copenhagen ayaa lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Sh Xassan Cabdulaahi oo kamid ah culimada Jaaliyada, wuxuuna sheekhu ka hadlay Alle kacabsiga iyo waliba jihaadka.
Sidoo kale waxaa khudbad aad udheer shirka kasoo jeediyay gudoomiyaha Jaaliyada Denmark faraca Copenhagen mudane Cumar Sh Aadan, wuxuuna gudoomiyuhu aad uga warbixiyay howlaha shaqo ee ay umada iyo halgankaba u hayaan, wuxuuna warbixin dheer kadhiibay mudadii ay xilka hayeen iyo wixii uqabsoomay.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay hogaanka dhaqaalaha ee Jaaliyada mudane Maxamuud Bashiir, wuxuuna hogaanku si qoto dheer uga hadlay dhinacyada dhaqaalaha ee Jaaliyada.
Dhinaca kale gudoomiyaha ayaa dadwaynihii kulanka soo xaadiray ufasaxay fikirkooda, waxayna xubnuhu siwayn u cabireen aragtidooda ku aadan geedi socodka guud ahaan halganka ay kujiraan shacabka Soomaalida Ogadenia.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay hogaanka warfaafinta Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia Mudane Xassan Macalim, wuxuuna hogaanku Jaaliyada uga warbixiyay waaqica dhabta ah ee kajira geeska Africa gaar ahaan Itoobiya, wuxuuna hogaanku siwayn wax uga ifiyay xaalada murugsan ee wadanka Gumaysiga Itoobiya.
Sidoo kale waxaa hogaanka hadalkiisa ukabay kuxigeenka Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO, mudane Axmed Ileeye, wuxuuna hogaanku dulmar kusameeyay marxaladihii kala duwanaa ee halganku uu soomaray iyo meesha wanaagsan ee uu marayo.